Une kusaona zvakanaka here? Izvi ndizvo zvinogona kukonzera | Bezzia
Une kusaona zvakanaka here? Izvi ndizvo zvinogona kukonzera
Tony Torres | | Matipi ehutano, Zvirwere
Kusaona zvakanaka chinhu chipingamupinyi pakuita mabasa ari nyore sekufamba wakachengeteka mumugwagwa. Kana izvi zvikaitika, zvinhu zvinoratidzika kunge zvakamonyaniswa, opaque, uye kunze kwekutarisa. Zvikonzero zvekutadza kuona mumaziso zvinogona kunge zvakasiyana-siyana. Nyangwe, mune zvimwe zviitiko zvinogona kukonzerwa nechimwe chinhu chehukukutu hwakati.
Nokuda kwechikonzero ichi, zvakakosha zvikuru kuti tisarerutsa mamiriro ezvinhu ayo pakutanga angaita seasingakuvadzi. Nokuti muzviitiko zvakawanda kusaona zvakanaka kwakabatana nokuneta, uye haipiwi kukosha kwakakodzera. Kunyangwe ichi chingava chimwe chezvikonzero, kana dambudziko rikaramba riripo zvakakosha kuti uende kuhofisi yeophthalmologist kuti aite ongororo yakakwana.
1 Zvikonzero zvekusaona zvakanaka
1.1 Refractive kukanganisa
1.2 Ziso rakaoma
Zvikonzero zvekusaona zvakanaka
Kana uine kusaona zvakanaka uye uchida kuziva kuti chii chingave chikonzero, saka tichakuudza kuti ndedzipi dzinogara dzichiitika. Nekudaro, zvakakosha kuti uite nguva yekusangana nachiremba wako kuti aongorore nyaya yako chaiyo. Sezvo kuva nechiono chakanaka kuchikosha kuti ugone ita mabasa ose ezuva nezuva mukuchengeteka kwakakwana. Kana ukaona kusaona zvakanaka, izvi zvinogona kunge zviri zvikonzero.
Matambudziko ekuona kana kukanganisa refractive ndechimwe chezvikonzero zvinowanzokonzera kusaona zvakanaka. Matambudziko akadai myopia, inova ndiyo inonyanya kukanganiswa yekuonaChimwe chezvimiro zvayo zvikuru kusaona zvakanaka.
Nenzira imwecheteyo, zvimwe zvikanganiso zve refractive zvakadai se hyperopia, astigmatism kana presbyopia, zvinogona kuva chikonzero chekuona kuchinjwa kana kusvibiswa. Kana chiono chako chisati chapedza kudzidza kwenguva yakareba uye uine chiono chisina kujeka, unofanira kuenda kunoongorora kuona kuti zvese zviri zvechokwadi.
Dry eye syndrome chimwe chikonzero chinogona kukonzera kusaona. Idambudziko rinobata vanhukadzi zvikuru, zvikuru vane makore anodarika makumi mana nemashanu ekuberekwa. Kuchinja kweHormonal ndicho chikonzero chikuru Del Ziso Rakaoma, ane chimiro chikuru kusaona zvakanaka. Pamusoro pekutsvuka, kunzwa kuchiedza, kunzwa kwegrit muziso, kubvarura kana kuomerwa kuchengeta ziso rakavhurika, pakati pevamwe.
Panguva yekuzvitakura, kushanduka kwakasiyana-siyana kwehomoni uye kwepanyama kunogona kuchinja kushanda kwenhengo dzakasiyana-siyana, kusanganisira maziso. Shanduko idzi dzinogona kuita kuti cornea iite shanduko mukukora kwayo nekukora, izvo zvinoita kuti ziso risakwanise kutarisa zvakanaka. Kunyange zvazvo isiri yakakomba muzviitiko zvakawanda, inogona kukonzerwa nezvinetso zvakakomba zvakadai se gestational diabetes. Nokudaro, kana iwe uri nepamuviri uye usina maonero asina kunaka, unofanira kuona chiremba wako nokukurumidza sezvinobvira.
Migraine misoro inogona kukonzera kusaona zvakanaka, kuwedzera kune zvimwe zviratidzo. Kunyanya, imwe ye zviratidzo zvisati zvaitika migraine kurwisa. Kana iwe kazhinji uchitambura nedambudziko iri uye ukatanga kuona kusaona kana kupenya kwechiedza, unogona kunge wakatarisana neocular migraine attack.
Imwe yeakajairika mamiriro emeso ane chekuita nezera uye chimwe chezvikonzero zvinowanzoitika zvekusaona. Nhasi ganda remaziso rinoshandiswa zviri nyore, saka zvakakosha kuenda kuna chiremba pane zvishoma zviratidzo. Nokuti kana nguva ichibvumirwa kupfuura, ziso rinogona kukura, kugomara, uye kutotungamirira kuupofu muziso.
Izvi ndizvo zvikonzero zvikuru uye zvinowanzoitika, pamwe nekuve zvisingakuvadzi. Nekudaro, kune zvimwe zvakakomba zvinokonzeresa senge glaucoma, chirwere cheshuga kana chirwere chetsinga, pakati pezvimwe. Kuti dambudziko rekuona harifaniri kufuratirwa kuti kana ikasarapwa nenguva, inogona kukonzera matambudziko makuru ekuona, uye kunyange upofu. Pasina kukanganwa kuti zvakaoma sei kuita chero chiitiko chezuva nezuva kana iwe usingafariri kuona kwakanaka. Tarisa maziso ako nguva dzose uye pane zvishoma zviratidzo, bvunza chiremba wako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Matipi ehutano » Une kusaona zvakanaka here? Izvi ndizvo zvinogona kukonzera
Mazano ekubvisa kunhuhwirira kwakashata kubva padhishi
Sei kuvimbana kwevakaroorana kuchikosha zvikuru?